आफ्नै बुबाको शब हेर्न पाएनन। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
आफ्नै बुबाको शब हेर्न पाएनन।
रेडियो झापा 100.7 MHz. आइतबार, भाद्र १४, २०७७ १२:२९:४७
१४भदौ,ताप्लेजुङ/ राजिन्द्र बुढाक्षेत्रीका बुवाको मृत्युपछि अरू दाजुभाइ, छरछिमेक भेला भए। उनीहरू सबै शवनजिकै गए। तर, राजिन्द्र पत्नी र छोराछोरीलाई लिएर आँगनछेउको डिलमा बसेर रोइरहे। भोलिपल्ट शव दाहसंस्कार गर्न घाटमा लैजाने बेला भयो। राजिन्द्रले सोचेका थिए, ‘घाटसम्म त जान देलान्।’ तर, समाज कति निर्दयी बन्यो भने उनलाई घाट पनि जान दिइएन।